Akhriso Khudbadii Madaxweyne Farmaajo uu Maanta Ka Jeediyay Furitaanta Kalfadhiga Sadaxaad ee Gobalaha Shacabka (Sawiro)
March 11th, 2018 Ruugcadaa
Walxo ka mid ah maddada lagu sumeeyay basaas hore oo Ruushka u dhashay oo la helay Saacad ka hor La wadaag qodobkan Facebook La wadaag qodobkan Twitter La wadaag
Sirtii Mr Galaydh Oo La Helay!!!
March 10th, 2018 Ruugcadaa
Wargeyska la yidhaahdo Albayaan oo ka soo baxa wadanka imaaraadka carabta, wuxuu wax ka qoray arimo badan oo ay ka ahayd damaca shirkada DP world iyo aragtida guracan ee Mr Galaydh salkana ku haysey waqooyinimada balse hadafkeedu yahay kala goynta soomaaliya.
Boqorka Sacuudiga salman ayaa fariin adag u diray dawlada Turkiga.
March 9th, 2018 Ruugcadaa
Boqorka Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa ku tilmaamay Dawlada Turkiga inay qayb ka tahay saddexda shaydaan oo ay weheliyaan Iran iyo kooxaha Islaamiyiinta ah argagixisada. Xag jirka ah.
Muuse Abdo Ma Leh Oo Waa Muusihiisii
March 8th, 2018 Ruugcadaa
Hablihii uu kun jeer ka ooyeysiiyey ee uu sagaashankii walaalahood laynayey, ee uu siddeetamaadkii na kuwii ay dhalleen iyo kuwii ay u dhaxayn birta ka aslayey, ayaa uu maanta u daarayaa filim uunkaba cudurro ku kicinaya. Isma beddelayo mana garaadsanayo Muuse iyo kuwa maanta dabo-humbacan ee uunka Soomaaliyeed soo gubay. Wuxuu Dhoodaan yidhi:
Muuse Biixi: “waan aqbalnay dagaalka ay ku baaqday Somaliya”
Dowladda Jarmalka ayaa 50-Mliyan oo Geni ugu deeqday Soomaaliya (Sawiro)
Dowladda Jarmalka ayaa 50-Mliyan oo Geni ugu deeqday Soomaaliya,taasoo wax looga qabanayo Arrimaha bini-adanimada.
Bilyan’dheerka ugu da’da yar caalamka oo digniin u jeediyay Trump
Hadalada ka dhanka ah muhaajiriinta ee ka imanaya aqalka Cad ee Mareykankana ayaa waxay nayad jabinaysaa in Mareykanka ay yimaado dadka sameeya barnaamijyada Komputarada.
Maxaabiis Laga Keenay Liibiya oo Muqdisho soo Gaaray (Sawiro)
March 7th, 2018 Ruugcadaa
Dhalinyara Soomaaliyeed oo Laga Soo Daayay Xabsiyo Ku yaala Dalka Liibiya ayaa Goor dhaw Soo Gaaray Muqdisho, ilaa 13 dhallinyaro Soomaaliyeed oo maxaabiiis ku ahaa dalka Liibiya ayaa sakay ka soo dagay garoonka Diyaaraha Aadan Cadde ee Muqdisho.
Dowlada Qatar oo ku baaqday in la ixtiraamo madaxbanaanida Dalka Somaliya..
March 7th, 2018 Iftiinshe
Qatar ayaa ka qaybgashay shir caalami ah oo heer caalami ah oo ku saabsan Soomaaliya,kaasoo lagu qabtay caasimadda Ingiriiska ee London. Wafdiga Qadar ee shirka ayaa waxaa hogaaminayay Tariq Ali al-Ansari, oo ah Agaasimaha Waaxda Xiriirka Caalamiga ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda.
Dalka Zimbabwe oo uu dhaqaale burbur ku dhacay waxaa aad u yar dadka kuu sheegaya guulaha ay ka gaareen ganacsiga, balse shirkadda Courteney Boot oo ay asaaseen lammaane is qaba waxa ay leeyihiin qiso taas ka duwan. Shirkaddani waxa ay soo saartaa kabo laga sameeyo haragga jeerta, yaxaaska, goroyada, iyo lo’ gisida.
Ehelo ku dagaalamay Horufadhi
March 6th, 2018 Ruugcadaa
Warar haatan nasoo gaadhay ayaa sheegaya in deegaanka Horufadhi uu dagaal ku dhex maray laba beelood oo walaalo ah.
Anaga oo Ku hadlayna magaca saxaafada waxaan walaalahan ugu baaqaynaa in caqligu shaqeeyo, ilaahayna laga baqo, xabad joojin deg deg ah la sameeyo.
Dowlada Turkiga oo Aqab Milateri ku Wareejisay Wasaarada Difaaca Soomaaliya (Sawiro)
March 6th, 2018 Iftiinshe
Dowlada Turkiga ayaa Agab Milateri ku Wareejisay Wasaarada Gaashaandhiga Soomaaliya, Kaas oo ah Agab Milateri. Agabkaan ayaa ah Darees Ciidan oo Dowladda Turkigu ay ugu talagashey Ciidamada Cirka iyo Badda oo ka mid ah Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed.
HANTIDII UU SOO TACBAY MAXAY U TARTAY!?
March 5th, 2018 Ruugcadaa
Bishii Janaayo 27-keedii Sannadkan 2018-ka waxaa Magaalada Smaland ee Dalka Sweden Xanuun ugu geeriyooday Ingvar Kamprad oo Sannado badan kamid ahaa Tobanka qof ee ugu Hantida badan Caalamka, sidoo kalena ahaa qofka ugu Hodansan dalka Sweden.
Gabadh Diiday Guurkeeda In Laga Bixiyo Shan Iyo Labaatan Milyan Oo Doollar
Gabadh Wariye Reer Sudan Ah Oo Nin Maal-qabeen Sucuudiyan ah Ka Diiday Inuu Ka Bixiyo 25-million oo Dollar Kana Door Biday Inay Nin Sudani ah oo Waxba Haysan Guursato?.
Sudhayo Oo Soo Gaadhay Deegaanka Iyo Galaydh Oo Kawaanka La Saari Doono!!!
March 5th, 2018 Iftiinshe
Waxaa deegaanada khaatumo soo gaadhay gudoomihii hore ee golaha Barlaamanka Khaatumo ee ku magac dheera Sudhayo, wuxuuna ka soo kicitimay dhinaca caasimada Soomaaliya, wuxuuna isugu yeedhay intii ay isku garabka Mr Qoorgaab ay isla ahaayeen, muxuuse yahay ujeedada ay xilligan u soo hambaabureen?!!!
Ciyaar Hidaha Iyo Dhaqanka Soomaaliyeed-VIDEO
Horaantii sagaashanadii ayaa la duubay ciyaar soomaaligan oo xilligaasi ka dhacday mid ka mid ah huteelada magaalada London, waxaana si yaable isugu laba rogaya rag in badan soo jebinayey aadna u yaqaanay qaababka jiibta iyo jaanta la isula helo, oo aan inaba caadi ahayn.
Adigu Ma Istaqaan!??.
Qofkii aan aqoon shalaydiisa,ma yaqaan maantadiisa halka uu joogu, kaan maantadiisa aan aqoona ma yaqaan Berri halkuu u socdo. Haddii aad maanta Aragtay Somali wadamada reer galbeedka ka ah wadayaal gaadiid waaweyn (truck Drivers), ama kuwa Taxi-iile yaal ka ah yurub & Amerika, Hala yaabin iyaguba shalay ayeey halkaan ka ahaayeen wada yaal gaadiid.
Guri Barwaaqo diinta uu aaminsan yahay dadka ha u sheego – Video
March 4th, 2018 Ruugcadaa
Aqoonyahan Soomaaliyeed oo kasoo jeeda deegaamada waqooyi ee dalka Soomaaliya ayaa ka dhiidhiyay been cad oo wasiir Reer Somaliland ahi ka qoray Sayid Maxamed Cabdule Xasan ilaahay ha u naxariistee.
Guri Barwaaqo oo ah beenaalaha, beentan cad ka qoray Sayid ka ayaa maamulka Somaliland ugu magacaaban warfaafinta, isaga oo dhowrkii jeer ee uu saxaafada soo hor istaagayna waxyaabo badan ka been sheegay.
Qormo Wax Ka Iftiiminaysa Xeeladaha Shirkadda DP World
Hayley Qaran Raisulwasaare Xassan Cali kheyre, Shacabka Soomaaliland wuxuu ka mudanyahay iney u mahad celiyaan una duceeyaan, Maaddaama uu ugu dhimriyay si ka duwan kuwa ay iyagu doorteen.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa qorsheynaya in laba sarkaal oo sarsare uu u diro dalka deriska ah ee Kuuriyada Woqooyi si loo sii xoojiyo debacsanaanta diblomaasiyadeed ee tan iyo billowgii ciyaarihii xilliyada qaboobaha ee ka furmay Kuuriyada Koonfureed.
Puntland Oo Kantarool Ka Furatay Yoocada
Sidaa aanu ku helayno xogaha ku saabsan maamul goboleedka Puntland waxay sheegayaan inay ka tanaasushay haysashadii Tukaraq ee ay canshuuraha ka guranaysey sanooyinkii la soo dhaaftay.
Cabdirashiid Macalin Faarax oo waraysi bixiyay – Video
March 3rd, 2018 Ruugcadaa
Aqoonyahan, ex G11, mudane Cabdirashiid Macalin Faarax oo haatan xubin ka ah golaha guurtida Khaatumo ayaa bixiyay waraysi uu si qoto dheer uga waramayo xaalada khaatumo.
Shirkii Xidhxidh Oo U Furmay Beesha Bahararasame Iyo Mr Qoorgaab Oo Dhex Fadhiya
Dhawaan ayey beesha Bahararasame ku dhawaaqday inay shir guud Isugu yimaadaan deegaanka xidhxidh, si markaasi ay beeshu Isugu turxaan bixiso waxna ay isaga weydiiyaan waxaa taagan xilligan.
Shirkii Ugandha oo lagu taageeray DFS iyo qodobo kasoo baxay
Shir magaalada Kampala uga socday wadamada ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ee AMISON iyo dowlada federaalka Soomaaliya ayey dowlada Soomaaliya ku bogaadiyeen horumarka ay ka samaysan dib u habaybta ciidamada.
Shirkaddii loo yaqaaney “British East India Company,” waxa ay ahayd shirkadii U horseeday wadanka Hindiya Gumeysigii ingiriiska ee markii dambe Ganacsigii isu bedelay Nidaam Gumeysi oo loo bixiyey “British India”.
March 3rd, 2018 Iftiinshe
Taariikh ahaan ku dhawaad labo boqol oo sanadood (200 years) ayey wadanka Hindiya shirkada “British india” si dad-ban ama aan toos ahayn u gumaysanaysay, ugu dambayntii markii taariikhdu ahayd 1857-dii ayaa boqoradii Ingiriiska ee Queen Elizabeth1 ku dhawaaqday dhulka cusub ee boqortooyada toos u hoos yimaada ee Hindiya.
Khayre oo ka hadlay heshiiska dekeda Berbera – Video
March 2nd, 2018 Ruugcadaa
Ra’iisal wasaaraha DFS mudane Khayre ayaa markii ugu horaysay ka hadlay heshiis ay shirkada DP Workd lagashay dowlada itoobiya oo ku saabsan dekeda berbera.
March 2nd, 2018 Iftiinshe
Dhaqtar u dhashay dalka Kenya ayaa shaqada laga diray kadib markii uu madaxa ka qalay qof aan ahayn kii qaliinka u baahnaa. Qof bukaan ah ayaa u baahnaa in madaxa lagaga sameeyo qaliin si looga saaro xinjir dhiig guntantay, halka qof kale oo bukaan ah uu u baahnaa daweyn yar maadaamaa uu madaxa ka bararsanaa sida uu qoray wargeyska Daily Nation ee Nairobi kasoo baxa.